Ngingayithola ngokushesha yini amagama angukhiye e-Amazon akhiqiza ngempela?
Nansi uhlu oluthile lwamathuluzi amane amakhulu ama-keywords we-Amazon yomkhiqizo osebenza ngempela. Ngezansi ngizokukhombisa i-AMZ Tracker, i-Keyword Inspector, i-Scope, ne-Unicorn Smasher. Ngiye ngahlola ngayinye yazo, ngakho-ke ngingaqaphele ukuthi bonke bobufakazi bokusetshenziswa.
Amz Tracker cishe iyithuluzi elihle lokulandelela nokuthola amagama angokhiye abalulekile kakhulu e-Amazon. Leli thuluzi lizoba usizo kakhulu kubo bobabili abathengisi be-novice, futhi abathengisi abaqeqeshiwe bebelokhu besebenza khona lapho iminyaka embalwa kakade. Kusho ukuthi ukusebenzisa i-AMZ Tracker awukwazi ukulandelela kuphela amagama angukhiye oyinhloko phezulu-asetshenziswe ngabathengisi ngaphesheya, kepha ungabona futhi ukuthi yikuphi okungenani abancintisana nabo abaseduze kakhulu - 24p ru. Okungaphezulu - leli thuluzi lidlulela ngaphezu kwamagama angukhiye we-Amazon, njengalokhu kufakwe isici se-On-Page Analyzer esakhiwe ngaphakathi kwakho uyohlala unendawo yokuthuthukisa uhlu lwakho lwemikhiqizo. Ekugcineni, ukuboniswa phezulu kwezinto ezifunwayo ku-Amazon.
I-Keyword Inspector akuyona nje ithuluzi elilodwa lokusebenza kumazwi angukhiye e-Amazon. Eqinisweni, i-suite egcwele yamathuluzi okucwaninga egama elingukhiye, njenge-Reverse ASIN I-Keyword Tool (iziphakamiso zegama eliyisihluthulelo okuthiwa i-ASIN ethile), I-Keyword Trends Tool (igama elingukhiye lomthengi, umkhiqizo othengiwe phezulu kanye neziphakamiso zosesho ezihlobene), Isivivinyo se-Indexation (esheshayo -Inqubo enhle ukuze uqinisekise ukuthi uhlu lwakho lwemikhiqizo luboniswa kahle ngabathengi bezimakethe ezihlosiwe), Ithuluzi lezincomo ze-Amazon (ukucinga amagama angukhiye asetha isikhathi eside kanye nemishwana yokusesha enconywa yona kuphela), kanye ne-Amazon Search Terms Tool Optimizer (ukuthuthukisa ukukhangiswa komkhiqizo wakho ekusesheni oku-intanethi).
Ububanzi nenye ithuluzi elihle lokukusiza ngokucwaninga amagama angukhiye e-Amazon. Phakathi kwezinhlangothi zayo ezinamandla kakhulu, leli thuluzi liwusizo kakhulu ukubona amagama angukhiye aphezulu avela emakethe yakho eseduzane ephikisana nayo. Ngaphezu kwalokho, ububanzi bungakusiza ukuthi ubone amanye amagama angukhiye athembisayo okwamanje athola ukuthandwa futhi akuphakamisele nawe. Ekugcineni, leli thuluzi libuye lihle uma kuziwa emkhankasweni wokwenza umkhankaso we-PPC, futhi ufune amaphezu okuzuzisa kakhulu ngaphakathi komncintiswano olinganiselwe. Futhi khumbula, ukuthi leli thuluzi lingasiza ngokulinganayo ukwenza izinto zibe lula futhi zivikeleke ngokuqinisekile - ngokuphathwa kwayo engozini, Ingqikithi ingabonisa ukuthi uthola imali engenayo yenyanga, ukuthengiswa kwemali, kanye nenzuzo enhle okumele ilindeleke emva kwe-FBA (Ukugcwaliseka Nge-Amazon ) izindleko.
Unicorn Smasher igama elihle ngempela lokulandelela ithuluzi lokusebenza kumazwi angukhiye e-Amazon, kodwa isaziwa ukuthi iyithuluzi elifanelekayo ukuqala ukubusa ngaphezulu. Kuthathwa ngokujwayelekile, leli thuluzi lonke lingakusiza ngokuhlaziywa kwedatha olunzulu ngamanani, ama-rankings athengisa kakhulu, ukulinganisela kokuthengisa, ukubuyekezwa kwamakhasimende, ukuphathwa okulula, kanye nokulinganiselwa kwamuva kwezimali. Sebenzisa i-Unicorn Smasher ukukhohlwa mayelana nokuqagela okungahleliwe okuphoqelelwe ukuba ukwenze kanye nhlobo.